Mpanamboatra sy mpamatsy rafitra Drawer - Factory Drawer System China
Ny vokatray dia amidy amina marika telo malaza be dia be: YANGLI, GERISS, HIFEEL. Izy ireo dia rafitra vatasarihana, sary miafina, sary mihetsika Ball, Slide amin'ny latabatra, bisikileta nafenina, tahony, savily fatana ary kojakojam-pitaovana fanaka hafa, izay ampiasaina amin'ny fanaka, lalimoara, fitaovana ao an-trano sns ...
Stainless vy toradroa shaf ...
Oven lafaoro tokana sofina ...
86mm Haavo vatosoa lafiny vilany ...
Tabilao mivelatra haavo 150mm ...
Slide malefaka manidy Slim Double Wall Drawer
Fampidirana:Mikatona malefaka manasaraka rindrina mitarika rindrina indroa matetika ampiasaina amin'ny lakozia lakozia sy fidiovana. Ity karazana fantsom-bokotra malefaka mihidy mihidy rindrina mihetsika ity dia mampiasa sary mihetsika undermount miaraka amin'ny fitaovana. Ny endri-javatra dia ireo sary mihetsika miasa mangina sy fampifangaroana feno tsy misy tabataba Raha liana amin'ny rafitry ny vatasarihana boaty misy anay ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Model No .: M04.86
Vatasarihana haavo 150mm mihetsiketsika amin'ny vatasarihana lozika mihodina
Fampidirana:Vatasarihana 150mm haavon'ny vatasarihana solika an-dakozia an-dabozia matetika ampiasaina amin'ny lakozia lakozia sy fidiovana. Ity karazana fantsom-bokotra malefaka mihidy mihidy rindrina mihetsika ity dia mampiasa sary mihetsika undermount miaraka amin'ny fitaovana. Ny endri-javatra dia ireo sary mihetsika miasa mangina sy fampifangaroana feno tsy misy tabataba Raha liana amin'ny rafitry ny vatasarihana boaty misy anay ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Model No .: M04.150
Tavoahangy 182mm haavo matevina manintona boaty vita amin'ny vy an-dakozia
Fampidirana:182mm haavo malefaka eo akaikin'ny boaty vita amin'ny vy vita amin'ny lakozia ao an-dakozia matetika no ampiasaina amin'ny kabine sy lakozia Ity karazana fantsom-bokotra malefaka mihidy mihidy rindrina mihetsika ity dia mampiasa sary mihetsika undermount miaraka amin'ny fitaovana. Ny endri-javatra dia ireo sary mihetsika miasa mangina sy fampifangaroana feno tsy misy tabataba Raha liana amin'ny rafitry ny vatasarihana boaty misy anay ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Model No .: M04.182
Sariitatra boaty vita amin'ny vy 118mm miolakolaka
Fampidirana:Sariitatra boaty vita amin'ny vy 118mm dia mihetsika mazàna ampiasaina amin'ny takelaka dakozia sy fidiovana. Ity karazana fantsom-bokotra malefaka mihidy mihidy rindrina mihetsika ity dia mampiasa sary mihetsika undermount miaraka amin'ny fitaovana. Ny endri-javatra dia ireo sary mihetsika miasa mangina sy fampifangaroana feno tsy misy tabataba Raha liana amin'ny rafitry ny vatasarihana boaty misy anay ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Model No .: M04.118
Rafitra fivezivezena malemilemy sy mangina ho an'ny dizika mihady rindrina roa
Fampidirana:Rafitra mihetsiketsika manakaiky mangina ho an'ny paosin-drindrina indroa ampiasain'ny tranokely lakozia sy fidiovana. Ity karazan-tsarimihetsika rindrina roa ity dia mampiasa mpihazakazaka miafina miafina miaraka amin'ny fitaovana. Ny endri-javatra dia ireo sary mihetsika miasa mangina sy fampifangaroana feno tsy misy tabataba Raha liana amin'ny rafitry ny vatasarihana boaty misy anay ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Model No .: M01.199
Rafitra boatin-drakitra ho an'ny vatasarihana vy sy fivoahana mangatsiaka mangina
Fampidirana:Rafitra boatin-drakitra ho an'ny vatasarihana vy sy fantsom-baravarana mangina mangina matetika ampiasaina amin'ny lalimoara an-dakozia sy fidiovana. Ity karazan-tsipika boatin-drindrina metaly an-dakozia ity dia mampiasa sary mitsivalana ambany miaraka amin'ny fitaovana. Ny endri-javatra dia ireo sary mihetsika miasa mangina sy fampifangaroana feno tsy misy tabataba Raha liana amin'ny rafitry ny vatasarihana boaty misy anay ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Model No .: M01.86
Rafitra fanoritsoritana vy vita amin'ny rindrina roa
Fampidirana:Matetika ampiasaina amin'ny takelaka an-dakozia sy fidiovana ny rafitry ny vatasarihana rindrina roa. Ity karazan-tsipika boatin-drindrina metaly an-dakozia ity dia mampiasa sary mitsivalana ambany miaraka amin'ny fitaovana. Ny endri-javatra dia ireo sary mihetsika miasa mangina sy fampifangaroana feno tsy misy tabataba Raha liana amin'ny rafitry ny vatasarihana boaty misy anay ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Rafitra fisarihana boaty indroa rindrina
Fampidirana:Ny rafitra rindrina boaty matevina misy rindrina dia ampiasaina matetika ho an'ny lalimoara an-dakozia sy fidiovana. Ity karazana rafitra boatin-boaty kely ity dia mampiasa sary mihetsika malemilemy tsy misy fotony miaraka amin'ireo fitaovana fanidiana. Azonao atao ihany koa ny miova hampiasa tsindry hanokatra sary mihetsika miafina miafina amin'ny sarimihetsika eo aloha. Ny mampiavaka ity vokatra ity dia ny slide drawer ambanin'ny tany izay azo ampiasaina amin'ny vatasarihana vy sy vatasarihana hazo. Afaka mamonjy ny vidin'ny lisitra ho anao. Raha liana amin'ny rafitry ny vatasarihana boaty misy anay ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Model No .: M02.89
Rafitra fanaovana sary mikatona malefaka mangina
Fampidirana:Ny rafitra vatasarihana famaranana mangina matetika dia ampiasaina amin'ny lalimoara an-dakozia sy fandroana. Ity karazana rafitry ny vatasarihana famaranana mangina ity dia mampiasa sary mihetsika malemilemy tsy misy fotony miaraka amin'ireo fitaovana fanidiana. Azonao atao ihany koa ny miova hampiasa tsindry hanokatra sary mihetsika miafina miafina amin'ny sarimihetsika eo aloha. Ny mampiavaka ity vokatra ity dia ny slide drawer ambanin'ny tany izay azo ampiasaina amin'ny vatasarihana vy sy vatasarihana hazo. Afaka mamonjy ny vidin'ny lisitra ho anao. Raha liana amin'ny rafitry ny vatasarihana boaty misy anay ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Model No .: M02.185
Slides Drawer Metal Drawer
Fampidirana:Tselatra vatasarihana boaty vita amin'ny vatomamy kely no ampiasaina matetika ho an'ny lalimoara an-dakozia sy fidiovana. Ity karazan-tsarimihetsika vita amin'ny boaty mihosin-drà ity dia mampiasa sary mihetsika malemilemy tsy misy fotony miaraka amin'ireo fitaovana fanidiana. Azonao atao ihany koa ny miova hampiasa tsindry hanokatra sary mihetsika miafina miafina amin'ny sarimihetsika eo aloha. Ny mampiavaka ity vokatra ity dia ny slide drawer ambanin'ny tany izay azo ampiasaina amin'ny vatasarihana vy sy vatasarihana hazo. Afaka mamonjy ny vidin'ny lisitra ho anao. Raha liana amin'ny rafitry ny vatasarihana boaty misy anay ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Model No .: M02.121